Abantu abaningi babhekana nenkinga yobuvila bezemfundo. Kulula nje, akulula ukuthi abaningi bazikhandle emsebenzini ohlelekile, okubandakanya uhlelo lwemfundo esazijwayele. Kodwa-ke, akekho ozosilinda - akuyona into yokuthi impumelelo ibizwa ngokuthi yimpumelelo. Ungaziphoqa kanjani ukuze ufunde?
Sekudlulile izigqoko ezibomvu. Manje imali eningi ithola ochwepheshe. Yiqiniso, akuzona njalo abantu abanezifundo eziningana eziphakeme. Kodwa-ke, iningi labo liqedile lesi sikole, kungakhathaliseki ukuthi kunamamaki aphezulu. Ungaziphoqa kanjani ukuya esikoleni?
Isimiso saleso sikole sinomqondo othile wokungabi nalutho. Ulwazi olunikezwa lapho luvame ukungadingekile empilweni futhi ludingeka kuphela ukuthuthukiswa okujwayelekile. Ngakho ungazihlupheli - khetha izinto ezibaluleke kakhulu kuzo zonke futhi ugxile kuzo imizamo yakho. Okuhlukile kuphela izibalo. Kufanele kufakwe ezifundweni ezibalulekile kuwo wonke umuntu, ngoba ngaphandle kwalo kunzima ukufunda ukucabanga ngokuhlaziya, futhi le mfanelo iyadingeka kunoma yimuphi umsebenzi.
Ngakho-ke, gxila ezintweni ezibalulekile, futhi ufunde konke okusemandleni ngepensela ngesandla ukuze udale umbono. Zibekele phezulu ukuze ufunde izigaba ezimbili okungenani eziqondisweni ezingekho "eziyisisekelo". Uma imakhemikhali iye yahlazeka, zama ukuxazulula imisebenzi elula, uma umlando ukukhumbula kuphela izenzakalo ezibaluleke kakhulu nezincazelo zawo.
Isikhathi sokukhishwa kufanele sisetshenziswe hhayi ekuhambeni nabafana / amantombazane, kodwa ngezihloko ozithandayo. Funa izincwadi ezinhle kulezi ziyalo, izincwadi ezinenkinga yokwanda okuyinkimbinkimbi kanye nezincwadi ezibheke kakhulu. Uma ungakabi nendaba eyintandokazi, zama ukuthola okungenani into eyodwa ezithakazelisayo. Yenza okulula okunikeziwe. Lokho esikutholayo, sivame ukuthanda okuningi. Kwanele ukuba ube ngumfana omuhle ngokujwayelekile nomfundi omuhle kakhulu ezifundweni zakho ozithandayo. Abafundi abajikelezayo bavame ukutholwa ngokuzikhandla, noma ukuphelela, okufanele baphathwe yi-psychotherapists. Ngakho gxila ezintweni ezithakazelisayo - futhi uziphoqe ukutadisha ngeke kudingeke.
Ungaziphoqa kanjani ukutadisha eyunivesithi? Indlela engcono kakhulu ukuzama ukuthola umsebenzi noma umkhuba ongakhokhelwa emsebenzini wakho wesikhathi esizayo. Uma uzizwa ngomkhuba, yiluphi ulwazi oludingekayo, ngokuzithandela uzothola ukwaziswa okudingekayo phakathi nezifundo zakho. Ungacela umsizi ochwepheshe ngesikhathi samaholide. Ngokwesibonelo, abafundi bezokwelapha ngezinye izikhathi bacela ukuba basebenzele odokotela abahlinzayo mahhala. Lokhu kuyashukumisa kakhulu, ikakhulukazi uma ochwepheshe ophezulu efuna kakhulu.
Indlela yesibili ukuthola umsebenzi onzima emaholidini, okukhokhwa kahle. Kuyasiza okuningi ukucabanga ngalokho okuzokwenzeka uma ungayitholi imfundo. Ngezinye izikhathi isibonelo sabazali ngaphandle kwemfundo enhle sisiza. Kodwa kungcono ukuzizame wena ngokwakho.
Indlela yesithathu ukuthola umeluleki wesayensi osithakazelisayo mayelana nesifundo. Ngokuvamile, izifundo zephrofayli zamayunivesithi zihlobene kakhulu nomunye nomunye. Yiba ngumphathi munye - uzoqala ukuthola nezihloko ezihlobene. Lokhu kwasiza i-troechnikam eminingi ekuqaleni ukuba ibe ngcono ekupheleni kokuqeqeshwa. Uma uthisha phakathi kwamamaki okwanelisayo ngokuzumayo abonakala ehle kakhulu, lokhu kuthuthukisa umbono womfundi. Ngokuvamile abantu abanjalo bathola umfanekiso "wabantu abanekhono abanolwazi", futhi lokhu kuyinhlangano ezuzisa kakhulu.
Indlela yesine ukudlala ngokuzethemba kwakho. Qhathanisa imiphumela yakho nalabo abahle kangcono kunawe. Akunabo "izinkanyezi" ezinkulu, okuyiqiniso, ukuqala. Qhathanisa wena nalabo ababi nakakhulu kunokuba ufunde, akufanele. Hlela kahle ukwenza umsebenzi kuze kube yilapho usinqoba, futhi uzofuna ukufunda kangcono futhi kangcono.
Ungaziphoqa kanjani ukuze ufunde? Indlela engcono kakhulu ukubona ukubaluleka kokutadisha wena ngokwakho. Akuyona othisha-othisha, kodwa ngokuphathelene nezidingo zakho nemigomo ekuphileni.
Thinta - kuyini? Isimo sithinteka ngokwezengqondo
Uthando lomfazi ngowesifazane. Uthando phakathi kwabesifazane ababili abahle
Iyini inkohliso yokubona
Ukuncintisana ngumqondo ophikisana nentuthuko
Izindwangu ze-Nail: izinketho ezithakazelisayo, izincomo nezibuyekezo
Inkukhu ngabhema: izimiso eziyisisekelo futhi zokupheka
Golyanovsky Pond: Amaholide emzini
Umnikelo ku-Sberbank waseRussia uqinisekisa ukuthembeka
Imfundo Military kwabesifazane eRussia. Kungenzeka futhi izinkinga eziyisisekelo
Kungakanani okufanele sisicabangele ingane ngonyaka 1? Ithebula isisindo ingane
Zander: incazelo, indlela yokuphila, umsoco
Zoo Petersburg: incazelo, ikheli kanye namahora okuvula
"IMisa Effect 3": ukudlula futhi ubuqili umdlalo. Ukudlula "IMisa Effect 3" umdlalo
Fettuccine yenkukhu kanye mushroom fettuccine ne ubhekeni.